Sweden: Sharci Cusub oo ku saabsan Dadka Xanuunsanaya ee lacagta laga jaro Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenSweden: Sharci Cusub oo ku saabsan Dadka Xanuunsanaya ee lacagta laga jaro
Dowladdu Sweden ayaa rabta inay bedesho sharciyada kuwa muddo dheer xanuunsanaa oo aan shaqeyn karin iyadoo la badalayo sharciga hore.
Dadkaas waa inay ka helaan caawinaad lacag hay’adda Försäkringskassan. tusaale ahaan qofka qaata 180 maalmood oo lacagta jirada ayaa laga jaraa kaalmadaasi hada lakin dowlada ayaa hada dooneysa in la fududeeyo arintaasi
hey’adda ceeymiska bulshada ayaa heshay dhaleeceyn badan. Qaar badan ma helin caawimaaddii ay u baahnaayeen.
Mar sii horreysay, dowladda ayaa sheegtay in hay’addu ay ka shaqeyso yareynta tirada dadka u baahan caawimaadda xagga lacagta.
Dowlada ayaa badaleysa qaabkii hore, qofka xanuunsada 180 maalmood ka badan horay lacag uma heli jirin lakin hada arintaasi ayaa la fududeenayaa
Tirada bukaanada yaan la yareyn maxaa yeelay hey’addu waxay dhaheysaa maya bukaanka qaata caawimada lacagta.
Hay’addu waa inay taa bedelkeeda ka shaqeysaa siyaabo kale oo lagu caawiyo kuwa jiran.
Tusaale ahaan, iyadoo la hubinayo inay helaan tababar sax ah ama daryeel caafimaad oo ku filan oo ay mar labaad ku shaqeyn karaan.